Nhau dzeBhaibheri: Anopinda Mukamuri Rakakiiwa - Kero Yepamutemo yeIndaneti yeZvapupu zvaJehovha
Pashure pokunge Petro naJohane vabva pahwiro pakanga panomuviri waJesu, Maria anosiiwa ari ogapo. Anovamba kuchema. Ipapo anokotama ndokutarira mukati mehwiro, sezvataona mumufananidzo wapfuura. Imomo anoona ngirozi mbiri! Dzinomubvunza kuti: 'Unochemeiko?'
Maria anopindura kuti: 'Vatora She wangu, uye handizivi kwavamuisa.' Ipapo Maria anotendeuka ndokuona munhu. Anomubvunza kuti: 'Uri kutsvaka aniko?'
Maria anofunga kuti munhuyo murimi webindu, uye kuti angave atora muviri waJesu. Saka anoti: 'Kana mamutora, ndiudzei kwamamuisa.' Asi, zvomenemene, munhu uyu ndiJesu. Apfeka muviri usingazivikanwi naMaria. Asi paanomudana nezita rake, Maria anoziva kuti uyu ndiJesu. Anomanya ndokuudza vadzidzi kuti: 'Ndaona iShe!'
Gare gare muzuvaro, apo vadzidzi vairi vari kuenda kumusha weEmausi, mumwe murume anovakumbanira. Vadzidzi vakasuruvara kwazvo nokuti Jesu akaurawa. Asi sezvavanofamba, munhuyo anotsanangura zvinhu zvizhinji zvomuBhaibheri zvinovaita vanzwe zviri nani. Pakupedzisira, apo vanomira nokuda kwezvokudya, vadzidzi vanoziva kuti murume uyu ndiJesu. Ipapo Jesu anonyangarika, uye vadzidzi vairi ava nokukurumidza vanodzokera Jerusarema kundoudza vaapostora pamsoro pake.
Ikoko kuchiri kuitika, Jesu anoonekawo kuna Petro. Vamwe vanonyandurwa pavanozvinzwa. Zvino vadzidzi vairi ava vanoenda Jerusarema ndokuwana vaapostora. Vanovaudza maonekere akaitawo Jesu kwavari panzira. Uye chinguvana pavanokuzivisa, unoziva here chinhu chinoshamisa chinoitika?
Tarira mufananidzo. Jesu anoonekamo chaimo mukamurimo, kunyange suo rakakiiwa. Haiwa vanofara sei vadzidzi! Hariziri zuva rinonyandura here? Ungaverenga here nguva dzaoneka Jesu kusvikira zvino kuna vateveri vake? Unowana kashanu here?
Muapostora Tomasi haazati ainavo panooneka Jesu. Saka vaapostora vanomuudza kuti: 'Taona iShe!' Asi Tomasi anoti achatofanira kuona Jesu amene asati akudavira. Eya, mazuva masere pashure vadzidzi vari pamwe chetezve mukamuri rakakiiwa, uye nguva ino Tomasi anavo. Kamwe kamwe, Jesu anooneka imomo mukamurimo. Zvino Tomasi anodavira.
Johane 20:11-29; Ruka 24:13-43.
Maria anotii kumurume waanofunga kuti murimi webindu, asi chii chinoita kuti azive kuti ndiJesu chaiye?
Chii chinoitika kuvadzidzi vaviri vari kuenda kumusha weEmausi?
Chinhu chinoshamisa chipi chinoitika apo vadzidzi vanotaurira vaapostora kuti vaona Jesu?
Jesu aoneka kangani kuvateveri vake?
Tomasi anotii paanonzwa kuti vadzidzi vaona Ishe, asi chii chinoitika mazuva masere gare gare?
Verenga Johane 20:11-29.
Pana Johane 20:23, Jesu akanga achitaura kuti vanhu vanobvumirwa kukanganwira zvivi here? Tsanangura. (Pis. 49:2, 7; Isa. 55:7; 1 Tim. 2:5, 6; 1 Joh. 2:1, 2)
Verenga Ruka 24:13-43.
Tingagadzirira sei mwoyo wedu kuti ugamuchire chokwadi cheBhaibheri? (Ruka 24:32, 33; Ezra 7:10; Mat. 5:3; Mab. 16:14; VaH. 5:11-14)